nofy ririnina - zokieva - Tononkalo Malagasy - Serasera.org
nofy ririnina - zokieva
Mahabe resaka ny hoe « DEMOKRASIA » fahalalahana miteny , na fahafahana maneho hevitra , izay raha atao bango-tokana ny heviny . Mipetraka ny fanontaniana hoe « nitondra inona teto amintsika ny fanomezana vahana ny fanehoan-kevitra samihafa feno baranahiny sy herisetra ? Moa tsy toy ny tadi-vavarana mamatotra ny gasy tsy mahay taratasy ny demokrasia mampikavia ? Raha ity demokrasia vahiny ifanomezan-tsiny ity izay efa nohezahina nampiharina teto nandritra ny taona vitsivitsy izay dia hita taratra fa varatra nitondra tsy fahombiazana izay iaraha-mitazana fa tsy nitondra soa ho an’ny tanindrazana.
Toa teren-ko masaka toa voalobo-jaza . Moa tsy afaka mitrandraka ny tena demokrasia isika ? manatsara mantsy e ! satria tsy atoro voanjo adiana, na ny ratsy ahifika amin’izany fa manana ny tsy tonta ny ela tsy mampiveravera sady tsy avela fa rehareha ny hoe « FIHAVANANA » izay toa anaran-tsy very fa lasa tsianjery, toa malaza tsy hinanana tahaka ny vilian-tsahona ankehitriny izay dradraina etsy sy eroa indrisy fa kely sisa dia afobe ilay paradisa, afon’ampombo nefa izany tsy maty fa miotrika, miotrika ao am-po tsy ho lo fa tsy maintsy hifoha na dia efa taloha .
Miha takon’ny fitiavan-tena marososona, ny fitiavan-karena sy ny fitiavam-bola mitakosina ka mampitrosina ! kanefa hoy aho hoe « na dia sarotra tadiavina anaty rambiazina tahaka ny rarina aza » dia tsy aiza fa mbola tena velona tsy mila ambolena ao am-pon’ny Malagasy tanteraka na dia efa reraka , dia toy ny vato natelin-trimo ka tsy miova tarehy sady tsy havelan’ny hasoany tsy hamiratra.
Marina fa ny omby indray mandry tsy indray mifoha fa ny miasa miaraka no fahombiazana, mety mbola misy ny ho mpitazana fa ndeha havotana ny tanindrazana. Tsy ho lalàn’ny fiaraha-monina fotsiny intsony fa ho lalàm-panjakana hampiharina isan-tanàna sy vohitra na tandrenivohitra na tambanivohitra dia hirohitra hanohitra izay mifanohitra amin’ny fihavanana. Tsarovy fa tsy ho avelan’ny ranomasina tsy hiombona isika fa tsy maintsy tafatombina eto amin’ity Nosy manjopîaka sady tsara bika no be mpitsiriritra. Raha atao aza hoe misy ny hevitra tsy mitovy dia izao no tsarovy fa toy ny tsipoy mifamelona, toy ny rano sy vary eny an-tanimbary hatrany anaty vilany dia miara miasa hatrany , toy ny akondro : ny avo manaloka ny iva, ny iva manotrona ny avo.
Jereo anie ny isam-pokontany : Raha misy fifandirana tsy azo ihodivirana tsy ahitana mangirana ; vahaolana mahomby ny fikatsahana ny fihavanana avy eo mifandray tanana.
Raha ampanjakaina ny fihavanana dia ho foana ny halatra, eny fa na dia ny tain’omby mivadika aza dia tsy hisy mpaka fa hahazo laka ny tahotra an’Andriamanitra.
Tsy hisy ny mpanao rano dikain’ny zinga, na tehina mialoha andriana fa samy haka ny anjara tandrify toy ny lela sy nify dia ho tanteraka ny hoe : hisaraka ho azy toy ny tany sy ny lanitra ny gidragidra tsy hita faritra.
Tsy azo odian-tsy hita toa vatan’orona na todihan-tsy tazana tahaka ny ravintsofina fa tsy maintsy tiavina sy hajaina ary lalaina aloha ilay Andriamanitra Tsitoha, satria avy aminy ny ohatra tsara indrindra tsy misy mpandimby vitany tamin’ny alalan’i Kristy ilay nampihavana ny olona samy olona ary ny olona sy Andriamanitra.
Rehefa izay no tontosa dia mora sy hisosa sady hiavosa ny fitahian’Andriamanitra , ka tsy ho NOFY RIRININA fa hambinina sy tena hiavaka ny fihavanana na ny demokrasia tena Malagasy, fa hangasiasy ireo mpila gafy avy any an-dafy !
Nofy ihany izany, fa tsy adidiko irery fa adidiko izaho sy ianareo satria ny tao-trano tsy efan’ny irery ary asa vadi-drano tsy vita raha tsy hifanankonana amin’ny ankohonanana.
Ny tondro tokana tsy mahazo hao, olona iray tsy mba vahoaka, koa ndeha hiara-hiasa dia ho kinasa ity nofy ririnina
Handrava, hanjera sy handrodana ary hangana sy hanorina ary hamboly koa .
Dia tsy ho nofy atoandro
Izao faniriako izao
Fa manery ahy isan’andro
Ka volaniko aminao.
Sokajy : Aingam-panahy, Eritreritra mandalo, Fahantrana, Fampaherezana, fananarana, fanantenana, fiainana, Fiaraha-monina, Fiononana, Fitiavana, Kolontsaina, Politika, Tanindrazana, tantara, Vavaka, vazivazy
Mpanoratra : zokieva
Nampiditra : zokieva
Daty : 03/11/2013
Mpamangy : 1515
im-10 tsy miboredika
FANALA SENTO !